Fitantanana ny dingan-dàlan'ny Conga Contract: manatsara ny fahombiazan'ny varotra amin'ny alàlan'ny automatisation d'exploitation document Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 10, 2020 Sabotsy, Oktobra 10, 2020 Douglas Karr
Tsy mora ny mitantana orinasa izay mahatsapa ho tsy misy dikany amin'ny mpanjifa manoloana ny tsena mitombo fahasarotana. Ny fahaizan'i Conga sy ny vahaolana vahaolana feno ho an'ny asa ara-barotra - ny fizotrany manodidina Ampifanaraho ny santionany amin'ny vidiny (CPQ), Fitantanana ny androm-piainan'ny mpanjifa (CLM), ary Antontan-taratasy nomerika - manampy ny orinasa hiatrika ny fahasarotana amin'ny fahatokisan-tena mba hahafahan'izy ireo manome traikefa amin'ny mpanjifa tsy misy ady ary manafaingana ny vola miditra.
Miaraka amin'i Conga, mandroso haingana ny orinasa hamaly ny filan'ny mpanjifa anio ary mampitombo ny hakingana hiomanana amin'ny rahampitso tsy azo antoka. Conga's Digital Document Transformation Suite dia natao hiara-miasa amin'ny fifangaroan'ny haitao an'ny orinasan'ny orinasanao ary hampifandray mivantana amin'ny CRM anao.
Inona no atao hoe fitantanana fiainana làlam-pifanarahana?
Ny Contract Lifecycle Management dia fitantanana mavitrika sy fomba ofisialy ny fifanarahana iray manomboka amin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana, fanajana ary fanavaozana. Ny fampiharana CLM dia mety hiteraka fanatsarana lehibe amin'ny tahiry sy fahombiazan'ny vidiny.
Fitantanana ny fiainana an-tsekoly Conga Contract
Conga CLM dia faran'ny farany fitantanana ny fiainana an-tsokosoko fifanarahana Vahaolana (CLM) izay mamarana ny vanim-potoanan'ny fizotry ny fifanarahana arak'asa sy rava ary manome traikefa avo lenta ho an'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Conga CLM dia mitondra ny hatsaran'ny fifanarahana amin'ny ambaratonga, mampihena ny fotoana tsingerina, manatsara ny vokatra azo avy amin'ny fifampiraharahana ary mampihena ny risika. Namboarina tao anaty rahona, Conga dia mampifandray tsy tapaka amin'ny vahaolana CRM hanatsorana ny asa ara-barotra. Conga dia manome hery ny sampana rehetra amin'ny diany hahatratra ny hatsarana ara-barotra.
Ny vahaolana vahaolana feno ao Conga dia manome hery ny fidiram-bola, ny asa ary ny ekipa ara-dalàna hiatrehana ny zava-tsarotra amin'ny orinasa amin'ny fomba mora. Misy izahay mba hanampy amin'ny fanafainganana ny orinasa, handefasana ny asa ary hanovana ny traikefan'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny vahaolana ho an'ny haben'ny orinasam-pandraharahana, manolo-tena izahay hihaona amin'ny orinasa amin'ny toerana tokony hamarinan'izy ireo ny toerana manaraka.
Frank Holland, CEO an'ny Conga
Conga CLM no fitaovana fitantanana fifanekena voalohany nanompo ny ambaratonga rehetra amin'ny fihenan'ny fahamatorana manomboka amin'ny novice ka hatramin'ny manam-pahaizana momba ny fifanarahana rehetra. Ny tsena ara-dalàna dia tsy mbola nanana tolotra tokana avy any amin'ny farany ambany ka hatramin'ny faran'ny fihenan'ny fahamatorana. Vokatr'izany, Conga CLM dia tsy vitan'ny orinasa mitombo haingana, fa ny fahaiza-manao kilasy orinasa ankehitriny dia azon'ny orinasa SMB / antonony amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny.
Ireo mpampiasa ny Salesforce dia afaka mitantana fifanarahana mivantana amin'ny rindranasa raha toa ka mandeha ho azy ny fitantanana ny androm-piainany (CLM) manomboka amin'ny famoronana ka hatramin'ny sonia. Tsy izany ihany, fa ny ekipan'ny varotrao dia afaka mitahiry sy mitantana fifanarahana tsy manam-petra, mamorona tatitra, manara-maso ny fifandraisana, ary maro hafa.
Ny Conga Documents dia manamora sy manatsara ny antontan-taratasy manakiana isan'andro sady manafaka ny mpiasa hiasa bebe kokoa. Ny fikambanana dia afaka mamorona, mitantana, miara-miasa ary manoratra amin'ny antonony ny antontan-taratasy rehetra manandanja amin'ny orinasa amin'ny fomba mora sy mahomby.
Ny automatisation dia manaisotra ny asa amin'ny dingana ary manala ireo dingana ataon'ny mpampiasa izay mety hiteraka lesoka, mamonjy fotoana sarobidy ary mampitombo ny fahombiazana sy ny famokarana. Ny fahaiza-manao eSignature azo antoka sy mitambatra dia manamora kokoa noho ny hatramin'izay ny famaranana ireo antontan-taratasy ara-dalàna, mamatotra ara-dalàna avy amin'ny toerana rehetra. Miaraka amin'ny vahaolana Conga Documents, azo antoka fa ho haingana kokoa ny tsingerin'orinasa.
Inona no atao hoe Configure, Price, Quote (CPQ)?
Configure, rindrambaiko mitanisa ny vidiny dia teny ampiasaina amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha (B2B) hilazana ireo rafitra rindrambaiko izay manampy ny mpivarotra mitanisa ireo vokatra sarotra sy azo ovaina.
Conga Configure, Vidiny, Vahaolana Quote
Conga CPQ dia ampifanaraho ny teny nalaina Vahaolana (CPQ) izay mitarika ny ekipa mpivarotra hanangana sy hanatsara ny tolotra amin'ny alàlan'ny fanomezana fahefana ny mpivarotra hisafidy ny fifangaroana vokatra sy serivisy tsara indrindra (famandrihana, serivisy aorinan'ny varotra ary serivisy matihanina) avy amin'ny katalaogna manerantany. Conga CPQ avy eo manamboatra vahaolana, mampihatra maodely momba ny vidiny, ary mamoaka ny teny nety indrindra hahazoana mpandraharaha. Conga CPQ dia manamora ny traikefa amin'ny fivarotana amin'ny fahatsapan'ny mpividy sy ny fikasany hividy amin'ny alàlan'ny hetsika fividianana, manampy ny fikambanana hahatratra ny hatsarana ara-barotra amin'ny alàlan'ny fanomezana hery ireo ekipa mpivarotra hivarotra amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fotoana fohy kokoa.
Ny teknolojia conga dia ahafahan'ny orinasa isan-tsokajiny, manerana ny indostria rehetra manerantany, hanao nomerika ireo antontan-taratasy sy fifanarahana mampandeha ny orinasany. Ny valiny dia ny fanangonana vola, ny tombony avo kokoa, ny fidirana haingana amin'ny vokatra sy serivisy ary ny hafainganam-pandeha.
Makà Demo Demo
Tags: b2bcongaconga clmconga cpqautomatique fifanarahanafitantanana fifanarahanacpqCRMfitantanana ny androm-piainan'ny mpanjifafanaraha-maso ny taratasyesignesignaturesalesforceWorkflow automation
Maninona ny marketing ara-potoana no lasa tena ilaina amin'ny vanim-potoana COVID